Skyland Condominium Udonthani - I-Airbnb
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguWilliam
Indawo yethu yokurenta enegumbi elinye ibonelela ngazo zonke izinto zokwenza ukuba ukuhlala kwakho e-Udonthani kube koyiswayo.
Iquka ibhedi enye elingana nenkosi, iTV yescreen esicaba esinokufikelela kwi-intanethi, iAir-conditioner, izixhobo zasekhitshini kunye nokhuseleko lwe-24/7.
Khangela "Skyland Condominium Udonthani" ukuze usifumane
"I-Skyland" condominium ikwindlela yomthombo, embindini kakhulu kwaye ikufutshane nayo yonke into ebandakanya iivenkile ezinkulu, iindawo zokutyela zasekhaya, imarike yesitalato sasebusuku, iYunivesithi kunye ne-7-11 ibekwe kwindawo echaseneyo!
Eyona nto ibalaseleyo kukuhlala kwakho ngaphandle kwebhedi epholileyo lichibi eliphezu kophahla kwaye indawo yokuzivocavoca iyafumaneka kwabo bathanda ukuzilolonga.
Eyona ndawo ilungileyo edolophini, iindlela ezahlukeneyo zothutho, ukutya kwasekhaya kwesitrato sasebusuku kanye phambi kwekhondom, ivenkile ye-7-11, ibhanki, iivenkile ezinkulu ngemizuzu embalwa yokuhamba kunye neendawo zokutyela ezininzi ezikufutshane.
Udadewethu uya kubamba ngexesha lokuhlala kwakho, Singabantu basekhaya kunye nabantu abanobungane kakhulu, ukuba unayo nayiphi na ingxaki, unokuqhagamshelana nathi ngoko nangoko. siya kuzama konke okusemandleni ethu ukusombulula ingxaki yakho kwaye sikuncede.
*Qaphela ukuba ndihlala eOstreliya, ndingakuphendula emva kwexesha ngenxa yezowuni yexesha kodwa emva kokuba ungenile udade wethu uya kuba ngumamkeli wakho, ungaqhagamshelana naye kwangoko.
Udadewethu uya kubamba ngexesha lokuhlala kwakho, Singabantu basekhaya kunye nabantu abanobungane kakhulu, ukuba unayo nayiphi na ingxaki, unokuqhagamshelana nathi ngoko nangoko. s…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Tambon Mak Khaeng